काठमाडौँ जाँदै गर्दा लागेको जामले बस भित्रै आमाको काखमा छोराको निधन ! - Birgunj Sanjalकाठमाडौँ जाँदै गर्दा लागेको जामले बस भित्रै आमाको काखमा छोराको निधन ! - Birgunj Sanjalकाठमाडौँ जाँदै गर्दा लागेको जामले बस भित्रै आमाको काखमा छोराको निधन ! - Birgunj Sanjal
काठमाडौँ जाँदै गर्दा लागेको जामले बस भित्रै आमाको काखमा छोराको निधन !
१० आश्विन २०७६, शुक्रबार १३:५०
त्रिभुवन राजपथमा सडक मर्मत तथा ठूला सवारीसाधनले आवागमनमा बाधा पुरयाएपछि भएको जामका कारण आज एक बिरामीको निधन भएको छ । निधन हुनेमा रौतहटको गौर नगरपालिका–७ का ३५ वर्षीय रुपलाल शाह रहेका छन् ।
रौतहटबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ना७ख ५३६४ नंको बसमा मिर्गाैला रोगी शाहलाई उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइँदै थियो ।उनको थाक्रे गाउँपालिका–२ हुलाकडाँडास्थित राजमार्गमा बसभित्र आमाको काखमा निधन भएको महादेवबँेसी प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक बाबुलाल श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
दुवै मिर्गाैलाले काम गर्न छाडेपछि शाहलाई डायलसिसका लागि सार्वजनिक यातायातमा काठमाडाँै ल्याइँदै थियो ।लामो जाममा १२ घण्टाभन्दा बढी समय कुर्नु पर्दा बिरामीको निधन भएको महादेवबँेसीस्थित जनजागृति माविका शिक्षक रामचन्द्र रुपाखेतीले बताउनुभयो ।
एम्बुलेन्समा ल्याउन पैसा अभाव भएपछि शाहलाई रात्रिबस चढाएर ल्याइँदै थियो । शाहको श व बाटोबाटै रौतहट लैजाने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो ।आमा, भाइ र दाजुसँगै शाह बसमा काठमाडौँ आउँदै थिए ।
आमासँगै सिटमा बसेका शाहकमे उनको काखमै निधन भएको हो । सडक मर्मत र ठूला सवारीसाधनका कारण झण्डै ३० किलोमिटर क्षेत्रमा जाम लागेको थियो । एम्बुलेन्ससमेत आवतजावत गर्न नसक्नेगरी सडक चार दिनदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ । दशैँका लागि घर निस्केका यात्रु बाटोमै अलपत्र छन् ।